Laurel, Indiana, United States
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguMary
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uMary iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
I-Cottage Lodge ibekwe kanye kwi-Main St of Laurel, IN.Inside inoyilo olulodwa lwe-rustic kwaye ifakwe ngokupheleleyo ngayo yonke into oya kuyidinga ngokuhlala kwakho.I-Wifi yasimahla, iTV, iWasher kunye neDryer.Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nezinto zokupheka.
I-cottage lodge yindawo esembindini yemisebenzi emininzi eyahlukeneyo yokuzonwabisa kule ndawo. Ukukhwela ihashe, ukuphuma kwindlela / ukukhwela iATV, ukukhwela isikhephe, ukuloba, ukukhwela inqanawa kunye nokuhamba ngephenyane.
4.91 ·Izimvo eziyi-97
4.91 · Izimvo eziyi-97
I-Cottage Lodge yimizuzu nje ukusuka e-Haspin acres apho unokonwabela ukukhwela kwaye ubuye kwaye wonwabele usapho kunye nabahlobo.Idolophu yethu yaseMetamora eyimbali engummelwane yimizuzu eyi-10 apho unokutyelela i-Whitewater Canal kunye neentsuku zeCanal.
Ungakonwabela ukukhwela ihashe ngaphandle nje kweMetamora ebekwe e-US 52.
IBrookville, IN yimizuzu engama-20 kude kwaye yaziwa ngeLake kunye neCanoeing kuMlambo iWhitewater.
Ndihlala ndithanda ukudibana nabantu abatsha kwaye ndenza konke okusemandleni am ukuba ndifumaneke kundwendwe lwam.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Laurel